भजनसंग्रह 45 ERV-NE - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 44भजनसंग्रह 46
भजनसंग्रह 45 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाई: “शोशन्निम” रागमा, कोरह परिवारको मस्किल भन्ने भजन। प्रेमको भजन।
45 जब म यी कुराहरू राजाको निम्ति लेख्छु,
सुन्दर शब्दहरूले मेरो मस्तिष्कमा भरिन्छन्।
शब्दहरू मेरो जिब्रोबाट आउँछन्,
मानौ ती शब्दहरू सिपालु लेखकका कलमबाट आइरहेकाछन्।
2 तपाईं सबै भन्दा असल हुनुहुन्छ।
तपाईं एकदम योग्य वक्ता हुनुहुन्छ।
यसकारण परमेश्वरले सदा-सर्वदा तपाईंलाई आशिष दिऊन्!
3 तिम्रो पटुकामा तरवार भिर।
तिम्रो महिमापूर्ण जंगी पोशाक लगाऊ।
4 तिमी अचम्मको देखिन्छौ।
धार्मिकता, सत्यता र न्यायको निम्ति जाऊ अनि लडाइँ जित,
तिम्रो शक्तिशाली दाहिने पाखुरा अद्भूत कार्यहरू गर्नलाई दक्ष थियो।
5 तिम्रा काँडहरू तीखा छन्, तिम्रा शत्रुहरूका मुटुभित्रसम्म गाडिने छन्,
जसले गर्दा मानिसहरू तिम्रै सम्मुख भूइँमा लड्ने छन्।
6 हे परमेश्वर, तपाईंको सिंहासन सदा-सर्वदाको लागि रहनेछ।
धार्मिकता नै तपाईंको शाही राजदण्ड हो।
7 तपाईंले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ
र दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्छ।
यसकारण परमेश्वर तपाईंका परमेश्वरले आफ्ना साथीहरू [a] माथि राज गर्न चुन्नुभएको छ।
8 तपाईंको पोशाक सुगन्धित द्रव्य; मूर्र, घिउकुमारी र तेजपातले युक्त छ।
यहाँ देखि महल हस्तिहाडले सजिएको छ, जहाँबाट तपाईंलाई खुशी पार्न संगीत आउँछ।
9 लोकन्तीहरू राजाहरूकै छोरीहरू हुन्।
तपाईंको दुलही तपाईंको दाहिनेपट्टि, निख्खुर सुनको मुकुट लगाएर उभिरहेकी छिन्।
10 हे मेरी स्त्री, मेरा कुरा सुन।
ध्यानदिएर सुन अनि तिमीले बुझ्ने छौ।
आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना पिताका परिवारलाई बिर्स।
11 यसकारण राजा तिम्रो सुन्दरतादेखि मक्ख पर्नेछन्।
ऊ तिम्रो नयाँ लोग्ने हुनेछ।
यसैले तिमीले उनको सम्मान गर।
12 टायर शहरबाट आएका सम्पन्न मानिसहरूले तिम्रो निम्ति उपहारहरू ल्याउनेछन्
यसकारण तिमीसँग तिनीहरू भेट गर्न सक्छन्।
13 राजकुमारी सुनको धागोले बुनेको पोशाकमा
14 राजाकहाँ पुर्याउनलाई, बेहुली आफ्ना सुन्दर पोशाकमा छिन्,
उनका लोकन्तीहरू पछि-पछि छन्।
15 तिनीहरू आनन्दको साथ आउँछन्।
आनन्दले नै भरिएर तिनीहरू राजाको महलमा प्रवेश गर्छन्।
16 राजा, तपाईंका पुत्रहरूले तपाईंपछि राज गर्नेछन्।
तपाईंले तिनीहरूलाई पृथ्वीभरि शासकहरू बनाउनु हुनेछ।
17 तपाईंको नाउँ सदाका लागि प्रसिद्ध बनाउनेछु।
मानिसहरूले तपाईंको सदा-सर्वदा प्रशंसा गर्नेछन्!
भजनसंग्रह 45:7 साथीहरू शुद्ध भाषामा “तपाईंको साथीहरूको सट्टमा सुगन्धित तेलले तपाईंलाई अभिषेक गरिन्छ।” यो खास तेल राजाहरू, पूजाहारी वा अगमवक्ताहरूको अभिषेकको निम्ति मन्दिरमा राखिन्थ्यो।